အသက် ၁၆ နှစ် - နိုဖပ်ကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲလိုက်သည်။ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများ - သင်၏ Brain On Porn
အသက် ၁၆ နှစ် - နိုဖပ်ကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲလိုက်သည်။ အဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများ
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၆ နှစ်ရှိပြီး PMOing ကို ၃ နှစ်ခန့် - တစ်နေ့လျှင်အကြမ်းအားဖြင့် ၁-၂ ကြိမ်ရှိသည်။ PMOing ကိုစဖွင့်တုန်းကငါဟာရှစ်တန်းအထိအလယ်တန်းကျောင်းမှာလူမှုရေးအရလူဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါအရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့တယ်၊ အထီးကျန်ဆန်တယ်။
ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုမုန်း၏။ ဤသူသည်ငါအပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဒီလတ်တလော Streak အထိဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါဒီ site ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာယခုနှစ်အစောပိုင်းကမှီတိုင်အောင်, ငါ့ပြဿနာတွေကိုအတူတကွနှစ်ခုနှင့်နှစ်ခုဝတ်နှင့်ဤအားလုံး (သို့မဟုတ်အရှိဆုံး) ဖြစ်ပေါ်စေဘာလဲသဘောပေါက်ခဲ့ပါဘူး။
လူတွေရဲ့ပုံပြင်တွေနဲ့ဒီဘဝပုံစံမှာပါ ၀ င်ခြင်းမှရရှိခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်အရမ်းနှစ်သက်ခဲ့တယ်။ ငါရပ်တန့်ဖို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ငါအမြဲမနက်ဖြန်နောက်တဖန်ထပ်မံယနေ့ကောင်းသောနှင့် fap ခံစားရနိုင်ကြောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလတ်တလော Streak သည်အထိ။ ငါ PMO အခမဲ့မည်မျှကြာသည်ကိုမပြောပါ။ အကြောင်းမှာလူတိုင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ကာလများတွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများခံစားရသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးအချိန်မှ စ၍ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှကြာပြီး ၁၀၀% ပိုကောင်းသည်ဟုခံစားမိသည်။
ငါသံသယမရှိဘဲသတိပြုမိပါပြီအကျိုးကျေးဇူးများကိုအောက်ပါအတိုင်းပါ၏ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်သွား; ကျွန်ုပ်သည် - လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း - အလွန်လူမှုရေးအခြေအနေများတွင်အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်နှင့်မကိုက်ညီခြင်း၊ စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းတွင်ထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းမပြုရခြင်း၊ ကျွန်တော့်ဘဝမှာရည်းစားတစ်ယောက်ရခဲ့ဖူးဘူး။ သို့သော်မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်၏စကားဝိုင်းများသည်အင်အားစိုက်ထုတ်ပြီး ၁၀၀% မျှသာပိုကောင်းသည်။ ငါအလုပ်မှာဒါမှမဟုတ်ကျောင်းမှာမိန်းကလေးတွေနဲ့အတွေးမပါဘဲပရောပရည်လုပ်နေတာပဲ၊ ငါ့ဘဝမှာသူတို့တွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့တစ်ချိန်ကငါစတင်ခဲ့တယ်။ ငါလိုယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်ဒါကအံ့ amazing စရာပါ။
ယုံကြည်မှု / self-ချစ်ခင်လေးမြတ်; တစ်ချိန်ကအဘို့ငါသူကိုဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ငါကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပြုမူနဲ့ကျွန်မလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်အရာနှင့်အတူဝမ်းသာတယ်ဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူယူပါ။ ဤသည်ရှေ့တော်၌ထိုကိစ္စတွင်မည်သည့်အခါမျှနှင့်အံ့သြဖွယ်ခံစားရ၏။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ; ငါပြင်းထန်စိတ်ကျရောဂါ, လူမှုရေးနှင့်ပုံမှန်စိုးရိမ်စိတ်နှင့်အတူရောဂါပြီ, ငါအမြဲပင်ပန်းခြင်းနှင့် unmotivated ခံစားရတယ်။ ဒီအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီ! အဆိုပါစိတ်ကျရောဂါအတွက်စိုးရိမ်ပူပန် 100% သွားပြီဖြစ်ပြီးငါတစ်ခုလုံးကိုနေ့ကတစ်လျှောက်လုံးယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လုံ့လရှိသူဖြစ်၏, 90% သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာထွက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါပြီတို့နှင့်ကြီးသောရလဒ်များကိုကိုမြင်လျှင်ငါ! ငါ nofap ၏အကြီးမြတ်ဆုံးအကြိုးကြေးဇူးမြားတစျဦးဖွစျသညျထင်ထားတဲ့ကျွန်မစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်တိုင်းလမ်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုကောင်းစေမယ်ဒါမယုံနိုင်လောက်အောင်လှုံ့ဆော်ဖြစ်ကြောင်းကို
ငါပျော်တယ်; ငါ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးငါပြောခဲ့ပြီးပြီဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှု၊ ဘုရားသခင်၌ကြီးမားသောယုံကြည်ခြင်းရှိခြင်းနှင့်အရာရာတိုင်းအပေါ်အကောင်းမြင်အမြင်ရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ငါသည်ဤ website နှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အရာခပ်သိမ်းအဘို့ဤမျှလောက်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောရှည်လျားသော post ကိုများအတွက်စိတ်မကောင်းပေမယ့်ကိုယ့်တွေအများကြီးပြောစေချင်တယ်။ ငါတကယ်သင်သည် (သင့်နေဆဲ nofap အချိန်ထိန်းသိမ်းခြင်းရုန်းကန်နေလျှင်) ဒီရေတိမ်ပိုင်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့ငါတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါပြီဘယ်အရာကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ဖြစ်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီဖတ်နေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားသခငျသညျကောင်းကြီးပေးကြလော့။
LINK - Nofap ကကျွန်တော့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်